Masokisi - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Kana zviri zvakajairika masokisi muhupenyu, ivo havana kungogadzirwa nemachira ekotoni. Yakasiyana yambiro inoita zvakasiyana mariri.
Inogona kupfupikiswa muzvikamu zvina.
1.Basic zvinhu: Kushandisa polyester / nylon yakafukidzwa yarn
Polyester uye ylon yakafukidzwa yarn inogona kushandiswa mukucheka kwemakotoni masokisi. Kunyangwe varume, masokisi, vakadzi sokisi, vana "sokisi, masokisi kana masokisi mapfupi, vese vanozvida. Sezvo zvakakosha zvemidziyo yekotoni masokisi mukugadzira, iwo mhando yejira rakaputirwa rinokanganisa zvakananga kunyaradza, durity uye kupora degree rekupfeka.
2.Maitiro akasiyana: Uchishandisa polyester / nylon DTY
Ese marudzi ese ekugadzira pamakotoni masokisi, chero madhiri, mitsetse, yenyika maitiro kana yakakura nzvimbo katuni dhizaini, zvese zvinoda kugadzirwa nemuvara werudzi. Aya mavara mavara anogona kushandisa polyester kana nylon DTY.
Kushandisa yakakwira mhando yeDTY panguva yekugadzira hazvizove nyore kupwanya yarns. Uye kuderedza zvakanyanya hurema hwekuita mukugadzira.
Rudzi rwekugadziridza rweDTY runofanirwa kuve rwakavakirwa pamavara echiremera CARDS, kana mavara samples anopiwa. Zvikasadaro ruvara rwemagetsi kugadzirwa richaverengerwa, uye kukanganisa kukanganisa kwekupedzisira.
3.Elastic hem: Uchishandisa Rubber yakafukidzwa yarn
Rubber yakafukidzwa yarn inogona kushandiswa nekotoni masokisi kugadzira kuti kumusoro / hem kwemasokisi ave akakwana kutambanudza pachiuno. Icho chinhu chakakosha mumaketi ese ekotoni.
Kunyangwe varume, masokisi, vakadzi sokisi, vana "sokisi, masokisi kana masokisi mapfupi, zvese zvinoda elastic kuti dzisatsvedza.
4.Kusona tambo: Uchishandisa Polyester DTY
Polyester DTY inogona kushandiswa makotoni masokisi’ kumusoro tying mutsara pachiuno uye masokisi’ kusona tambo pazvigunwe.
Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura OEKO-TEX satifiketi uye zvinogona kuiswa kumarudzi ese ezvigadzirwa zvakapedzerwa zvevana nevacheche.